CloakCoin စျေး - အွန်လိုင်း CLOAK ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို CloakCoin (CLOAK)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ CloakCoin (CLOAK) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ CloakCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $1 037 207.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ CloakCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
CloakCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CloakCoinCLOAK သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.175CloakCoinCLOAK သို့ ယူရိုEUR€0.147CloakCoinCLOAK သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.133CloakCoinCLOAK သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.159CloakCoinCLOAK သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.57CloakCoinCLOAK သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.1CloakCoinCLOAK သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč3.84CloakCoinCLOAK သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.648CloakCoinCLOAK သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.232CloakCoinCLOAK သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.243CloakCoinCLOAK သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$3.9CloakCoinCLOAK သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.35CloakCoinCLOAK သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.925CloakCoinCLOAK သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹13.08CloakCoinCLOAK သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.29.37CloakCoinCLOAK သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.239CloakCoinCLOAK သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.263CloakCoinCLOAK သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿5.42CloakCoinCLOAK သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.21CloakCoinCLOAK သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥18.45CloakCoinCLOAK သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩207.06CloakCoinCLOAK သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦67.48CloakCoinCLOAK သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽12.74CloakCoinCLOAK သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴4.83
CloakCoinCLOAK သို့ BitcoinBTC0.00001 CloakCoinCLOAK သို့ EthereumETH0.000437 CloakCoinCLOAK သို့ LitecoinLTC0.00295 CloakCoinCLOAK သို့ DigitalCashDASH0.00191 CloakCoinCLOAK သို့ MoneroXMR0.00195 CloakCoinCLOAK သို့ NxtNXT13.86 CloakCoinCLOAK သို့ Ethereum ClassicETC0.0238 CloakCoinCLOAK သို့ DogecoinDOGE48.29 CloakCoinCLOAK သို့ ZCashZEC0.00185 CloakCoinCLOAK သို့ BitsharesBTS6.68 CloakCoinCLOAK သို့ DigiByteDGB6.71 CloakCoinCLOAK သို့ RippleXRP0.573 CloakCoinCLOAK သို့ BitcoinDarkBTCD0.00596 CloakCoinCLOAK သို့ PeerCoinPPC0.588 CloakCoinCLOAK သို့ CraigsCoinCRAIG78.8 CloakCoinCLOAK သို့ BitstakeXBS7.38 CloakCoinCLOAK သို့ PayCoinXPY3.02 CloakCoinCLOAK သို့ ProsperCoinPRC21.69 CloakCoinCLOAK သို့ YbCoinYBC0.00009 CloakCoinCLOAK သို့ DarkKushDANK55.45 CloakCoinCLOAK သို့ GiveCoinGIVE374.21 CloakCoinCLOAK သို့ KoboCoinKOBO37.93 CloakCoinCLOAK သို့ DarkTokenDT0.161 CloakCoinCLOAK သို့ CETUS CoinCETI498.93
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 05 Aug 2020 19:55:01 +0000.